Tsy fahafahana vonjimaika no azony fa asa ivelan’ny fonja no tanterahiny hoy ny loharanom-baovao iray, ary ny Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria no anaovany io asa io. Tsy tokony hiala ivelan’ny fari-piadidiana ara-pitsaran’i Morondava izy amin’izany, hoy hatrany ny loharanom-baovao.
Loharanom-baovao hafa indray no mitatitra fa niala teto Morondava omaly sabotsy i Leva, nisy nahita azy nandalo tao Mahabo, niazo an’Ankilizato. Hiakatra any Antananarivo ?
Olona niisa efatra aminy no natolotra ny Fampanoavana teto amin'ny Fitsarana ambaratonga voalohany Morondava ny harivan’ny 24 aprily 2019, taorian'ny famotorana nataon'ny Zandary teto an-toerana noho ny raharaha vono olona, dia Raveloson Ludovic Adrien dit Leva Sydney, ny vadiny, izay mpiray lisitra aminy tamin’ny fifidianana solombavambahoaka farany teo, ny zanany lahy ary lehilahy iray.
Voatonona tamina raharaha fanimbana ala arovana ihany koa ity olomboafidy ity.
Nandefa taratasy any amin’ny governemanta, ny Antenimieram-pirenena tamin’ny alalan’ny filohany, Razanamahasoa Christine, ny zoma lasa teo, mangataka ny hamotsorana an’ity solombavambahoaka voafidy tao Mahabo ity sy Rasolomampionona Hasimpirenena voafidy tao Fandriana, ity farany izay voatazona am-ponja vonjimaika ao Antanimora Antananarivo nanomboka tamin’ny volana aprily 2019 voarohirohy tamin’ny fivarotana ny tany iorenan'ny « Villa Elisabeth » nampiasain'i Pr Zafy Albert, filoham-pirenena teo aloha, eny Ivandry Antananarivo.